Qaybta 1.How in dib iPad in Lugood 12 ee Windows
Qaybta 2. Sida loo dib iPad in Lugood 12 Mac
iPads waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iibin Apple waxyaabaha ku saabsan suuqa. Haddii hadda aad iska leh aad iPad markii qaar ka mid ah, laga yaabaa inaad la soo ururay xaddi badan ee files waxa on. Inta badan, files waa kuwa aad muhiim u ah in aad oo aan aad jeclaan lahayd in iyaga laga badiyo ay dhacdo in ayna iPad. Taasi waa sababta ay smart in ay sameeyaan hayaan joogto ah iPad in Lugood 12. iPad in Lugood 12 hayaan waxaa la samayn karaa labada on Windows iyo Mac. Ka hor inta aadan ka akhriso tutorial ku saabsan sida in ay dib u kor iPad in Lugood on Windows iyo Mac, waa in aad leedahay labo ka mid ah talooyin ku hay.
1. Ka hor inta aadan dib aad iPad la Lugood, waa in aad ku xidhi aad iPad in aad PC ama Mac isticmaalaya cable yimid aad iPad.
2. Lugood waa in si toos ah la furo marka iPad xiran yahay. Haddii aan samayn, waxaa gacanta furo.
3. Lugood si toos ah dib kartaa ilaa aad iPad mar kasta oo qalabka aad ku xidhan, haddii aad doorato in ka fursadaha.
4. hayaan waxaa la samayn karaa labadoodaba gacanta oo toos ah.
Si aad dib kor u tahay in ay u nuqul ka files ka iPad si aad u computer Windows. Habkan, oo aad nabadgelyo ku heli doonto haddii aad soo gaarto khasaaro xogta shil ah. Lahaanshaha gurmad sidoo kale waa mid waxtar leh haddii aad heli iPad cusub oo doonaya in ay u gudbiyaan goobaha ay ka hore mid si.
Haddii doorasho la hubiyaa, Lugood si toos ah dib doonaan ilaa aad iPad mar walba oo aad u xirmaan your computer. Laakiin, gurmad buugga ayaa sidoo kale waxaa la heli karaa wakhti kasta.
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay in la sameeyo waa in lagu xiro aad iPad si aad u computer. Markaas, furo Lugood. In geeska bidix ee kore ee suuqa kala Lugood aad arki doonaa button qalabka. Hoos qalabka, waxaad arki doontaa tab Kooban.
Guji ku yaal, iyo dhammaan macluumaadka ku saabsan qalab aad la soo daabici doonaa. Marka aad sidaas samayso, dhinaca midig ee suuqa aad ku arki doonaa dib menu.
Hadda, halkan waxaan ku leeyihiin fursado badan. Dhinaca bidix ee aad leedahay fursado ah ee u hayaan si toos ah. Waxaad dooran kartaa haddii aad rabto inay badbaadi on iCloud ama on your computer. Hayaan Automatic dib doonaa dhammaan faylasha aad meel la rabay mar kasta oo qalab aad kuugu xiriiriyo kombiyuutarka.
Laakiin, waxa aan aad u danaynaya, waxa uu ku yaalaa dhinaca midig. Kuwa yihiin fursadaha ay buuga dib.
Haddii aad diyaar u tahay in ay gacanta gadaal ilaa aad telefoon, Up Back guji Hadda. Markaas, daaqad cusub ayaa soo bixi doona, oo aad weydiinaya in aad rabto in aad dib ilaa laga daadiyo ama aan.
Waa wax ay billaabeen in ay dib ilaa barnaamijyadooda aad sidoo kale. Marka laga aad dooratay, waxaad ka dib markii guji in ay dib ama ma in ay dib u kor-ada aad cusub, suuqa kala yar oo ka muuqan doona sare ee shaashadda.
Suuqa kala Tani waxay kuu soo sheegi doonaa in hanaanka gurmad waa in horumarka. Habka loo sameeyaa mar bar buluug buuxiyo ilaa gebi ahaanba.
Ka hor inta taageerto ilaa gacanta, waxa kale oo aad fursad u haystaan ​​sir hayaan aad. Taas macnaheedu waxa weeye ilaalinta hayaan aad la sirta ah, haddii aad ka walwalsan tahay in qof kale laga yaabaa in aad u qaadato. Tani waa mid aad waxtar u leh haddii aad leedahay xasaasi info ku kaydsan aad iPad.
Si toos ah oo gacanta macluumaad KMG-up ka mid ah fariimaha qoraalka, qoraalada, soo wac taariikhda, ugu cadcad xiriir, goobaha codka, goobaha widget, sawiro ku giringiriya Camera ama Photos keydiyay. Laakiin, files kale warbaahinta (songs, videos, iyo qaar ka mid ah sawirada tusaale ahaan) aan la xoojiyaa ee nidaamkan. Si ay iyaga gadaal ilaa, in aad marka hore u baahan doontaa inaad iyaga u hagaagsan oo Lugood.
Bal qiyaas isagoo u hagaajinno aad iPad, iyo qofka la doonayo inaan ku saxno kuu sheegayaa in ay u socdaan in ay leeyihiin in ay u tirtiri xogta oo dhan. Taasi waxay noqon lahayd khasaaraha daran, ma uu doonaynin waxay? Si looga hortago in ka dhacaya, dib si fudud oo dhan xogta ka iPad in Lugood on Mac. Geedi socodka waa mid aad u fudud, oo aad la mid ah in ay kor u taageero on Windows ah. Xaqa in la sheegay, taageero ilaa Mac xitaa fudud. Ha noo tuso sida.
Sida had iyo jeer, talaabada ugu horeysaa waa in aad furaysto iPad in aad Mac iyo ordi Lugood. Marka aad sidaas samayso, la helo qalab aad ee dhinaca bidix ee suuqa kala Lugood ah.
Markaas, xaq-riix qalab aad iyo dooran Back Up.
Marka aad sidaas samayso, dhammaan xogta ka iPad badbaadi doontaa Mac.
Soo celinta hayaan ka Lugood waa mid aad u fudud. On Mac inaad sameyso oo dhan waa xaq-riix qalabka aad on kaas oo aad rabto in aad soo celin gurmad ay u doortaan iyo Soo Celinta ka kaabta.
In Windows, dooran celin ka kaabta, taas oo soo socda si ay button Back Up Hadda, in gurmad menu.
Sidii hore u soo sheegnay, doonaa qaar ka mid ah files warbaahinta oo aan la xoojiyaa. Files ka mid ah songs, videos iyo sawiro qaarkood. Si aad u leeyihiin files kuwaas xoojiyaa, waxaad u baahan doontaa inaad iyaga u hagaagsan. Tani waxa aad u fudud, sidoo kale.
First of dhan, waxaad u baahan doontaa in ay ku xidhmaan aad iPad in aad PC ama Mac iyo abuurtaan Lugood. Marka Lugood ayaa bilaabay, mar labaad loo dooran aad iPad liiska Devices ee dhinaca bidix ee suuqa kala Lugood ah.
Marka aad xulo iPad, liiska fursadaha muuqan doonaa guud ahaan sare ee shaashadda. On liiska in aad dooran kartaa music, filimada ama sawiro.
Aan niraahno aad rabto in aad u hagaagsan sawiradaada. Just dhigay Calamadee qaybaha soo socda si ay u hagaagsan Photos. Waxaad dooran kartaa galalka aad rabto in aad u hagaagsan, ama si fudud u hagaagsan oo dhan fayl. Haddii aad ururinta waa weyn, aad rabto in aad kaliya ku wareejin qaar ka mid ah fayl ah.
> Resource > Lugood > Sida loo dib iPad in Lugood 12 Mac iyo Windows Kombiyuutaro